Ovy Avy Ao Però Ve No Ho Sakafon’ireo Olombelona Voalohany Ho Eny Amin’ny Planeta Mars? · Global Voices teny Malagasy
Ovy Avy Ao Però Ve No Ho Sakafon'ireo Olombelona Voalohany Ho Eny Amin'ny Planeta Mars?
Voadika ny 09 Janoary 2016 16:28 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, русский, Català, Ελληνικά, عربي, Español
Karazana ovy peroviana. Sary Flickr an'ny kaonty Go!Pymes Fotos (CC BY-SA 2.0)
Manao andrana iarahana ankehitriny ny NASA, masoivoho Amerikana fantadaza manerantany momba ny any an'habakabaka, sy ny Foibe Iraisampirenena momba ny Ovy – Centre International de la Pomme de terre (CIP) ao Però, mba hiarahana mijery ny fomba hambolena ity vodin-javatra ity eny amin'ny tanin'i Mars. Vaovao azonay tamin'ny BBC Mundo.
Mikasika ireo singa mahavelona entin'ny ovy, milaza ny Centre International de la Pomme de terre (CIP) hoe :
Misy karazany 4.000 azo hanina ny ovy, izay ny ankamaroany dia any amin'ny Andes any Amerika Atsimo no ahitàna azy.
1,4 lavitrisa manerana ny tany no mihinana ovy ho toy ny foto-tsakafony, ary mihoatra ny 300 tapitrisa taonina ny fitambaran'ny famokarana azy.
Manana lanja lehibe amin'ny resaka fiahiana ara-tsakafo ny ovy manoloana ny fihazakazaky ny fitombon'ny mponina sy ny fiakaran'ny tahan'ny hanoanana manerana izao tontolo izao. […] Manankarena angovo ny ovy, izay sakafo maoderina azo karakaraina malaky, mahavelona, mora ambolena aminà toerana tery, tsy lafo vidy ary vonona ny ho hatokona tsy ilàna fikarakarana lafo vidy akory. Ny banky fitahirizana voa ao amin'ny CIP dia manana karazana ovy marobe avy amin'izao tontolo izao, izay ny 7.000 dia teratany avokoa, ovy dia sy nohatsaraina.
Misy karazana ovy 4.500 ao Però. Izany no antony hisafidianan'ny CIP ny any, anivon'ireo karazana rehetra ireo, izay iray mety hifanaraka amin'ny zavamisy eny amin'i Mars.
Manao famintinana fohy ny tranonkala Huachos.com momba ny fivoaran'ny ovy sy ny hoaviny :
3.800 taona lasa izay ny ovy no natao ho famboly, nanamorona ny farihy Titicaca, teo anelanelan'i Però si Bolivia, avy eo niaraka tamin'ny fahatongavan'ny Eoropeana tany Amerika, 500 taona lasa izay, dia niparitaka nanerana izao tontolo izao. Amin'izao fotoana izao, raha mitàna ny maha-laharana faha-efatra azy amin'ireo voly fihinana manerana ny tany ny ovy, misy tetikasa iray natomboka miainga avy ao Però mba hanondrànana azy ho eny an'habakabaka.
Efa nanomboka andrana tamin'ireo ovy sahady ireo siantifika, ka tamin'izany dia toetoetra mitovitovy amin'izay misy eny amin'i Mars no nambolena ireo vodin-javatra ireo, tamin'ny tany nalaina tany an'efitr'i Joya, any amin'ny faritr'i Arequipa, any atsimon'i Però.
“Tsy ahitana soritra aina ireny tany volkanika ireny, tsy misy hafa amin'ny eny amin'i Mars”, hoy ny filazan'i Joel Ranck, lehiben'ny sampandraharaha misahana ny seraseran'ny CIP.
Mandritra ity dingana voalohany ity, dia ovy 9 karazana no horaisina, atao izay hitsiriany eo amin'ilay tany hay, ary ao anatin'io tontolo ambany fanarahamaso io, ezahana vokarina ny teotoetra misy eny amin'ny planeta Mars mba hahitàna izay ho fiantraikany ao amin'ny fitombon'ny ovy. Izany rehetra izany dia ao anatin'ny ezaka hamantarana hoe atraiza no mety ho azo amelomana zavamaniry eny amin'ilay planeta mena.
Ny tany efitra ao Arequipa, ao amin'ny distrikan'i La Joya, no raisina ho toy ny toerana fanalahidy satria vinavinaina ho tsy mifanalavitra amin'ny an'ny planeta Mars. Tamin'ny 2009, efa nandraman'ireo mpanamory teny amin'ny Sambondanitra Iraisampirena natao ny fampivoarana ny fanandramana ny fampitsiriana ovy peroviana eny amin'i Mars. Ny hevitra tamin'izany dia ny hamboly ovy karazany dimy amin'ireo telo arivo misy ao Però, “arakaraky ny tanja-panoherany sy ny fahaizany miova filàna ara-tsakafo”, mba hahafahana manaporofo fa hoe mety ho azo atao ny mamboly “sakafo” eny amin'ilay planeta mena.
Nanentana ny hetsika tao amin'ny Twitter koa ireny vaovao ireny :
Manandrana mamboly ovy eny amin'ny Mars ireo siantifika
Ny ovy peroviana no zava-pihinana voalohany ho tonga eny amin'ny Mars
Mandalina ny fambolena ovy eny amin'i Mars ny “Centre International de la Pomme de terre” sy ny NASA
Ny ovy peroviana no zava-pihinana voalohany ho tonga eny amin'ny Mars, mba hanao salchipapa marsiana milay ry zareo dia handeha hanao fety eny ny rehetra (?)
Hainahandro malaza ao Però ny salchipapa, ifangaroan'ny saosisy voatetika boribory kely, aroso miaraka amin'ny ovy voaendy.